Diyaaradda SriLankan waxay dib u bilawday Moscow - Colombo Duulimaadyo ka imanaya Madaarka Domodedovo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda SriLankan waxay dib u bilawday Moscow - Colombo Duulimaadyo ka imanaya Madaarka Domodedovo
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Wararka Sri Lanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Markii hore Shirkadaha Diyaaradaha ee SriLankan iyo Domodedovo waxay iskaashi sameeyeen sanadihii 2011 ilaa 2015, tirada rakaabka waxay gaarayeen 115,000 oo rakaab ah.
Diyaaradaha SriLankan Airlines waxay aadayaan hal duulimaad todobaadle ah oo sabti ah.
Waqtiga imaanshaha Domodedovo waa 4:30 subaxnimo, waqtiga bixitaanka - 7:15 pm
Adeeggu wuxuu dib u bilaabmi doonaa laga bilaabo 31-da Luulyo, 2021.
Shirkadda hawada ee Sri Lanka, SriLankan Airlines, ayaa duulimaadyada ka bilaabaysa Madaarka Moscow Domodedovo oo loo sii wado Colombo laga bilaabo Julaay 31, 2021. Domodedovo waa garoonka kaliya ee garoonka diyaaradaha ee Moscow kaas oo rakaabku si toos ah ugu duuli karaan meeshan.
Shirkada duulimaadka ayaa duulimaadkeedii caadiga ahaa ee todobaadlaha ah mari doonta maalinta Sabtida. Waqtiga imaanshaha Domodedovo waa 4:30 subaxnimo, waqtiga bixitaanka - 7:15 pm
“Tani waa xiriir muhiim ah oo hawada u ah shirkadda duulimaadyada ee SriLankan maadaama aan ku xirmayno waddanka ugu weyn adduunka oo sidoo kale loo yaqaan mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee dhaqan iyo taariikh ahaan loo tago. Hawlgalkani wuxuu bixin lahaa waddo safar cusub oo sahlan oo isku xirka Xiriirka Ruushka iyo dalalka ku xeeran. Waxaan si xamaasad leh u sugeynaa inaan kusoo dhaweyno booqdayaasha Ruushka ee Sri Lanka iyo rakaabka diyaaradaheena duulimaadka ku tagaya Ruushka, ”ayuu yiri madaxa shirkada SriLankan Airlines Vipula Gunatilleka.
Markii hore diyaaraddan duulimaadka ah iyo Domodedovo waxay iskaashi sameeyeen sannadihii 2011 illaa 2015, taraafikada rakaabka waxay gaarayeen 115,000 oo rakaab ah.
"Waqtigan xaadirka ah Colombo waxaa loo arkaa inay tahay meel u gaar ah duulimaadyada diyaaradaha ee Moscow", ayuu yiri agaasimaha garoonka diyaaradaha ee Moscow Domodedovo Airport Andrey Pavlov. Imaatinka shirkadda SriLankan Airlines ee suuqa Ruushka waxay fureysaa fursado badan oo horumar dalxiis oo dalalkeenna ah. Waxaan hubnaa in khibraddeenii hore ee guuleysatay ee wada-shaqeynta ay noo oggolaan doontaa inaan si wax ku ool ah u shaqeyno mustaqbalka ”.
SriLankan Airlines noqday kii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Koonfurta Aasiya ee qaata qiimeynta 'Dheeman' ee Shirkadda Diyaaradaha Khibrada Rakaabka (APEX) iyo SimpliFlying, oo ah jaangooyo laga helay tallaabooyinka amniga ee dheeraadka ah iyo taxaddarrada nadaafadda ee dhammaystiran ee loo hoggaansamay tan iyo bilowgii cudurka adduunka SriLankan Airlines waa shirkad abaalmarin ku guuleysatay oo sumcad wanaagsan ku leh hoggaamiye caalami ah xagga adeegga, raaxada, amniga, kalsoonida, iyo waqtiga dhowrista.